Wasaaradda Qorshaynta oo Agaasintay shirkii Labaad ee Madasha Hormarinta Puntland Qaybta Cadaaladda – Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation
May 8, 2017 May 8, 2017 HComments Off on Wasaaradda Qorshaynta oo Agaasintay shirkii Labaad ee Madasha Hormarinta Puntland Qaybta Cadaaladda
Waxaa maanta Wasaaradda Qorshanta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ka qabsoomay Shirkii labaad ee Hay’adaha is ku shaqada ah, Shirka wuxuu ku saabsa Qaybta Cadaaladda (justice Sector).
Hagaajinta Cadaaladdu waa mid kamid ah afartii waxyaabood ee Dawladda maanta jirta ay balanqaaday waxaana hadafka shirku ahaa in la ogaado maxaa qabsoomay? Maxaa caqabado ah? Maxaa lagusixikaraa?
Waxaa shirka daahfuray Wasiir ku-xigeenka Wasaaaradda Qorshaynta Mudane: Siciid Faarax Maxamud oo si qoto dheer uga hadlay muhiimadda uu shirkan u leeyahay qaybta Cadaaladda iyo sidii ha’dada is ku shaqada ah u yeelan lahaayeen wada shaqan wanaagsan.
Waxaa isna kahadlay shirka Agaasimaha Wasaarada Cadaalada Maxamed Cali Faarax oo aad u bogaadiyay Kaalinta ay ku leedahay Wasaaradda Qorshayntu barnaamijkan iyo sida habsamida leh ee ay usoo agaasintay, wuxuu kaloo agaasimhu ka hadlay sidii dhamaan hay’adaha is ku kooxda ee Cadaaladu ay u muujin lahaayeen howlkarnimo iyo firfircooni sidii looga mira dhalin laha Qorshaha Hormarinta Dowladda Puntland.
Sidoo kale waxaa shirka ka hadlay Madaxa Ha’adda UNDP ee Puntland Sayid Sahibzada oo u ku celceliyay Ha’adaha Dowladda ee is ku shaqada ah sida ay uga faa’iidaysan lahaayeen shirka iyo shirarka xigaba.